Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" yakatoburitswa, ziva kuti chii chitsva | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" yakatoburitswa, tsvaga kuti chii chitsva
Iri pakupedzisira pakati pedu iyo nyowani vhezheni ye Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla", iyo inouya mushure memhando dzinoverengeka dzekuyedza, danho rekutonhora kwakazara kwechigadziko chepakeji uye ndokupasa bvunzo dzekupedzisira uye kururamisa kwekukanganisa.
Mune iyi vhezheni itsva yekuparadzira Linux Kernel 5.8 kuitiswa kwakasimbiswa, pamwe neiyo desktop nharaunda inokwidziridzira kuGnome 3.38 (ine shanduko zhinji uye kugadzirisa zvinogamuchirwa), zvigadziriso zvepakeji uye nezvimwe.
1 Nhau huru dzeUbuntu 20.10 "Groovy Gorilla"
2 Dhawunorodha Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla"
Nhau huru dzeUbuntu 20.10 "Groovy Gorilla"
Mune ino shanduro nyowani, tinogona kuwana izvo iyo desktop yakagadziridzwa kuGNOME 3.38 uye iyo Linux kernel kusvika 5.8. (Kana iwe uchida kuziva nhau dzeGnome 3.38 unogona kuzvitarisa Mune inotevera chinongedzo, pamwe nenhau Linux 5.8)
Linux 5.8 yakaburitswa zviri pamutemo mushure mekuvandudza pamwe nemazhinji kumusoro uye pasi uye idzi nhau
Uye ndezvekuti nekuitwa kutsva kwe Gnome 3.38, izvi zvinobvumidza mushandisi kugovana nyore nyore kubatana kweWi-Fi ine smartphone kana piritsi kuburikidza neQR kodhi.
Uyewo Tinogona kuwana shanduro dzakavandudzwa dzePython, Ruby, Perl uye PHP uye yakagadziridzwa system system senge PulseAudio, BlueZ uye NetworkManager.
Ndichiri pane chikamu chegadziriro yekupakata, iyo nyowani vhezheni yeLibreOffice 7.0 hofisi suite yakaitwa.
Kana zvakadaro iyo edition yeARM, iyi vhezheni itsva yakasimbiswa yeiyo Raspberry Pi 2, 3 uye 4.
» Neichi chiziviso, tinopemberera kuzvipira kweRaspberry Pi Foundation mukuita pachena nzvimbo kune vanhu kutenderera pasirese. » , akadaro Mark Shuttleworth, CEO weCanonical. » Isu tinokudzwa kutsigira chirongwa ichi nekusimudzira Ubuntu paRaspberry Pi, kungave kwekushandisa pachako, zvinangwa zvekudzidzisa, kana sehwaro hwekuvandudza bhizinesi nyowani. ".
Uyewo, Shanduko yekushandisa default packet firita nftables matafura akaitwa. Kuti urambe uchienderana nekudzokera kumashure, iyo iptables-nft package inowanikwa, iyo inopa zvinoshanda neiyo imwecheteyo yekuraira mutsara syntax semuma iptables, asi inoshandura mhedzisiro mhedzisiro mu bytecode nf_tables.
Kana zviri zvekusimudza, tinogona kuona kuti sarudzo yekumisikidza ye ZFS faira system haisisina izwi rekuti "Ongororo."
Wakawedzera kugona kugonesa Active Directory sosi kune iyo Ubiquity simaki.
Sndokubvisa iyo popcon package (mukurumbira wemakwikwi) weiyo main line, iyo yaishandiswa kuendesa isingazivikanwe telemetry nezve kurodha pasi, kuisa, kugadzirisa uye kubvisa mapakeji.
Kubva pane iyo data yakaunganidzwa, mishumo yakaitwa pamusoro pekuzivikanwa kwezvikumbiro uye zvivakwa zvakashandiswa, izvo zvakashandiswa nevagadziri kuita sarudzo nezve kubatanidzwa kwezvimwe zvirongwa mukutanga dhirivhari. Popcon yanga ichitumira kubva 2006, asi kubvira pakaburitswa Ubuntu 18.04, pasuru iyi pamwe neyakawiriraniswa neserver server yaputswa.
Kuwanika kune iyo / usr / bin / dmesg utility inorambidzwa kune vashandisi veboka «adm«. Icho chikonzero chakataurwa ndiko kuvapo kweruzivo mune iyo dmesg kuburitsa iyo vapambi vanogona kushandisa kufambisa kugadzirwa kwemikana yekukwira kwekuwedzera. Semuenzaniso, dmesg inoratidza dutu rekurasa muchiitiko chekudonha.
Dhawunorodha Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla"
Mufananidzo we Ubuntu 20.10 yave kuwanikwa kurodha pasi, asi nekuti vazhinji vanozoedza kurodha vhezheni iyi nyowani, unogona kuikanda kubva ku FTP server kunonoka, saka kana nguva yacho yasvika ndinokurudzira kuti usarudze kurodha pasi neimwe nzira isiri yekurodha pasi, senge kushandisa rukova.
Izvozvi iwe unogona kugadzirisa kubva kune yekushandisa sisitimu nemirairo "gadziriso-maneja -c -d".
Kuti utore mufananidzo pa USB mudziyo unogona kushandisa Etcher, chinova chishandiso cheplatform.
Chekupedzisira, pamusoro peUbuntu 20.10, tinogona zvakare kuwana mifananidzo yeakasiyana Ubuntu mavhenji neshanduro, senge Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu uye UbuntuKylin (China edition).
Saka nekudaro iyo Ubuntu flavour mifananidzo inoitwa kuti iwanikwe kune wese munhu nekukurumidza mushure mekuburitswa kweUbuntu, saka inyaya yekumirira zvishoma nezvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" yakatoburitswa, tsvaga kuti chii chitsva
Ubuntu Studio 20.10 "Groovy Gorilla" inouya ne KDE Plasma uye nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeQBittorrent 4.3 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo